ANGAMBA, TSY ANGAMBA · L'Homme, son aura et son évolution
> ANGAMBA, TSY ANGAMBA
Classé dans : — cyrius @ 12:58
Manonofy izao ny foko
Ny fitiavako mifofo
Mihovitra ao anatiny ao
Miteny izy fa tsy re
Angamba tiany ise ?
Mirehitra ny foko
Mitsiriritra ny vatanao
Moa ise bikàna be
Sa adala izy ve ?
Angamba aho tia,
Eto ve no hitafa ?
Sa koa any an-kafa ?
Fa hiaraka atsy ho atsy
Ka valio an-taratasy
Raha tia, matokia
Fa izaho hiaro an-dry
Ny mpandrahona raha misy
Lazao ahy, aza matahotra mihitsy
Ianao ilay zazavavy
Moa ny ampontsika izao sahala ?
Liana ny hanohana ara -bola ?